ကြောင်လေးတွေဟာ သူတို့ရှာဖွေသတ်ဖြတ်ထားတဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အိမ်သို့ယူဆောင်လာလေ့ရှိတာက ဘာကြောင့်လဲ ? ? ? – SoShwe
Home/Other/Animals/ကြောင်လေးတွေဟာ သူတို့ရှာဖွေသတ်ဖြတ်ထားတဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အိမ်သို့ယူဆောင်လာလေ့ရှိတာက ဘာကြောင့်လဲ ? ? ?
ကြောင်လေးတွေဟာ သူတို့ရှာဖွေသတ်ဖြတ်ထားတဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အိမ်သို့ယူဆောင်လာလေ့ရှိတာက ဘာကြောင့်လဲ ? ? ?
ကြောင်ချစ်သူလေးတွေအနေနဲ့ မိမိရဲ့အိမ်မွေးကြောင်လေးတွေကို လည်လည်သွားခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် ရရှိလာမယ့် နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကို သိရှိခံစားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – အပြင်မှာ အခြားကြောင်လေးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အိမ်ကိုကြောင်ချစ်သူလေးတွေ ခေါ်လာတာတို့ ၊ အိမ်မှာကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ သခင်တွေအတွက် ကြိုးစားပမ်း စားရှာဖွေသတ်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ တိရစ္ဆာန်အသေလေးတွေကို လက်ဆောင်အဖြစ် သယ်လာတာတို့ပေါ့နော်။
ကြောင်လေးတွေကို ကြောင်စာကျွေးပေမယ့်လည်း သူတို့လေးတွေက အပြင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ သူတို့ထက်သေးငယ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ရှာဖွေပြီး သတ်ဖြတ်လေ့ရှိပါတယ်။ သခင်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကြောင်လေးတွေကို ကြောင်စာတွေ ဝဝလင်လင်ကျွေးထားတာတောင်မှ ဒင်းတို့က အပြင်မှာ အခြားတိရစ္ဆာန်တွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ရသလားဆိုပြီး စိတ်ဆိုးလို့မရပါဘူးနော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါဟာကြောင်လေးတွေရဲ့သဘာဝပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြောင်လေးတွေက တိရစ္ဆာန်အသေကောင်လေးတွေကို သခင်ရှိရာအိမ်သို့ သယ်လာတယ်ဆိုတာကလည်း သူတို့လုံခြုံတယ်လို့ ခံစားရတဲ့အရပ်မှာ ၄င်းတို့ရှာဖွေသတ်ဖြတ်လာခဲ့တဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို အနှောင့်အယှက်ကင်းကင်းနဲ့ နားအေးပါးအေးစားချင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာလည်း ကြောင်လေးတွေဟာ တိရစ္ဆာန်အသေကောင်မဟုတ်တဲ့ သခင်နဲ့အတူတူ ကစားလို့ရမဲ့ အရုပ်လေးတွေ ယူလာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့လေးတွေက ကိုယ့်ရဲ့သခင်နဲ့ ဆော့ကစားချင်တဲ့ သဘောမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ကြောင်လေးတွေကို အဲ့လိုမျိုး တခြားတိရစ္ဆာန်တွေကို သတ်ဖြတ်တာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ သခင်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကြောင်လေးတွေနဲ့ များများဆော့ကစားပေးသင့်ပါတယ်။
ေၾကာင္ေလးေတြဟာ သူတို႔ရွာေဖြသတ္ျဖတ္ထားတဲ့ တိရစာၦန္ေလးေတြကို အိမ္သို႕ယူေဆာင္လာေလ့ရွိတာက ဘာေၾကာင့္လဲ ? ? ?
ေၾကာင္ခ်စ္သူေလးေတြအေနနဲ႔ မိမိရဲ႕အိမ္ေမြးေၾကာင္ေလးေတြကို လည္လည္သြားခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာမယ့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္ေတြကို သိရွိခံစားရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ – အျပင္မွာ အျခားေၾကာင္ေလးေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး အိမ္ကိုေၾကာင္ခ်စ္သူေလးေတြ ေခၚလာတာတို႔ ၊ အိမ္မွာက်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ သခင္ေတြအတြက္ ႀကိဳးစားပမ္း စားရွာေဖြသတ္ျဖတ္ခဲ့ရတဲ့ တိရစာၦန္အေသေလးေတြကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ သယ္လာတာတို႔ေပါ့ေနာ္။
ေၾကာင္ေလးေတြကို ေၾကာင္စာေကၽြးေပမယ့္လည္း သူတို႔ေလးေတြက အျပင္ကိုေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ထက္ေသးငယ္တဲ့ တိရစာၦန္ေလးေတြကို ရွာေဖြၿပီး သတ္ျဖတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ သခင္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ေၾကာင္ေလးေတြကို ေၾကာင္စာေတြ ဝဝလင္လင္ေကၽြးထားတာေတာင္မွ ဒင္းတို႔က အျပင္မွာ အျခားတိရစာၦန္ေတြကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ရသလားဆိုၿပီး စိတ္ဆိုးလို႔မရပါဘူးေနာ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒါဟာေၾကာင္ေလးေတြရဲ႕သဘာဝပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေၾကာင္ေလးေတြက တိရစာၦန္အေသေကာင္ေလးေတြကို သခင္ရွိရာအိမ္သို႕ သယ္လာတယ္ဆိုတာကလည္း သူတို႔လံုျခံဳတယ္လို႔ ခံစားရတဲ့အရပ္မွာ ၄င္းတို႔ရွာေဖြသတ္ျဖတ္လာခဲ့တဲ့ တိရစာၦန္ေတြကို အေႏွာင့္အယွက္ကင္းကင္းနဲ႔ နားေအးပါးေအးစားခ်င္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ခါတစ္ရံမွာလည္း ေၾကာင္ေလးေတြဟာ တိရစာၦန္အေသေကာင္မဟုတ္တဲ့ သခင္နဲ႔အတူတူ ကစားလို႔ရမဲ့ အ႐ုပ္ေလးေတြ ယူလာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ သူတို႔ေလးေတြက ကိုယ့္ရဲ႕သခင္နဲ႔ ေဆာ့ကစားခ်င္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ေၾကာင္ေလးေတြကို အဲ့လိုမ်ိဳး တျခားတိရစာၦန္ေတြကို သတ္ျဖတ္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ သခင္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ေၾကာင္ေလးေတြနဲ႔ မ်ားမ်ားေဆာ့ကစားေပးသင့္ပါတယ္။
Previous လူတိုင်းမြင်တွေ့သင့်သည့် ချစ်စရာခွေးလေးများရဲ့ ပုံရိပ်များ။
Next သင့်အနေနဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် လေယာဉ်ဖြင့် ခရီးသွားတော့မယ်ဆိုရင် အခြေခံအားဖြင့် သိထားသင့်သည့်အချက်များ။